Lalao hilalaovana amin'ny WhatsApp | Androidsis
DaniPlay | 10/08/2021 18:00 | Nohavaozina amin'ny 11/08/2021 02:00 | Fampiharana Android, WhatsApp
Ny lamaody amin'ny alàlan'ny WhatsApp dia lasa lamaody taona vitsivitsy izao. Ny fahasamihafan'izy ireo dia midika fa tsy mankaleo isika rehefa ao anaty vondrona iray, indraindray maro amin'izy ireo no mampiseho fahanginana lehibe, tsy misy zavatra tsara satria kely ny hetsika ataon'izy ireo, zavatra azo vahana amin'ny tolo-kevitra tsirairay aseho eto.
Raha tianao ho fantatra hoe iza amin'ireo no mirona amin'izao fotoana izao, dia tsara kokoa ny mijery ilay lisitra, samy hafa ny tsirairay amin'izy ireo ary mampiseho fahafinaretana be izy ireo. Ireo lalao hilalaovana ho an'ny WhatsApp amin'ity 2021 ity Ny zava-dehibe indrindra dia ireto manaraka ireto, tadidio fa ny tsirairay dia mety miova arakaraka ny faritra.
1 Tady fanontaniana
2 Olana amin'ny matematika
3 Safidy roa
4 Fahamarinana na sahy
5 Vinavina ny sarimihetsika na andiany
6 Fanamby manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9
7 Eritrereto ny lesoka
8 Inona ireo teny ireo?
9 Tadiavo ny totozy
Io no iray amin'ireo lalao be mpampiasa indrindra ao amin'ny vondrona WhatsApp nandritra ny taona maro. avy amin'ny sarambabem-bahoaka. Fifandraisana iray ao amin'ny vondrona no mametraka fanontaniana ary ny voalohany mamaly tsara dia ny manaraka handefa fanontaniana vaovao hovalian'ny mpifandray.
Mety amin'ny fanaovana pineapple miaraka, ankoatry ny fanokafana ny saina ho an'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny vondrona sy ny fandraisana anjara hitazomana ilay hetsika. Ny valin'ny fanontaniana dia manomboka amin'ny fanontaniana iray ary tsy misy farany, farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny asan'ny mpandray anjara rehetra.
Olana amin'ny matematika
Io angamba no iray amin'ireo lalao be mpampiasa indrindra amin'ny WhatsApp, mety ho an'izay mahay isa fa tsy be litera. Ny emojiis isa dia matetika ampiasaina, manao tsipika mahitsy na avy any ambony ka hatrany ambany, matetika izy ireo dia fanampiny, fa koa fampitomboana sy fizarazarana.
Ankoatra io lalao io dia azo lalaovina ihany koa ny isa tsy hitaOhatra, raha mahitsy ianao dia afaka mahita ny tarehimarika mifangaro ary mametraka ilay tsy eo. Ny fanamby amin'ny matematika dia mahafinaritra ary koa ny fampihetseham-batana hampihetsi-po ny saina. Mety amin'ny karazana vondrona rehetra.
Azo antoka fa fantatrao izany, satria io no iray amin'ireo malaza indrindra rehefa milalao amin'ny WhatsApp. Safidy roa ihany no omen'ny tompon'andraikitra izay tokony hisafidiananao ny eny na ny eny, tsy ilaina ny milaza tsia amin'ny iray amin'ireo izay miseho, satria tsy arahana ny fitsipiky ny lalao.
Mety amin'ny famakiana ny ranomandry eo anelanelan'izay rehetra tafiditra anaty vondrona, na hanao fivoriana, mivoaka hisotro, ankoatry ny zavatra hafa. Manipy safidy roa azo tanterahina, ary avy eo miandry ny valin'ny olona iray na maromaro farafaharatsiny. Mihaona amin'ny iray raha te handray anjara ianao ary hiditra amin'ny lalao.
Fahamarinana na sahy
Iray amin'ireo lalao fety mahazatra miaraka amin'ny namana izy io, tsara indrindra ihany koa ho toy ny lalao hilalaovana amin'ny WhatsApp, ankoatry ny fahafinaretana ary koa idealy hamaky ny ranomandry. Ny milaza ny marina amin'ny iray amin'ireo fanontaniana apetraky ny namanao na ny fanekena ny fanamby omen'izy ireo anao amin'izany fotoana izany.
Ny lohahevitra dia manapa-kevitra ny mpandray anjara rehetra ao amin'ny vondrona WhatsApp, ka mety raha mbola tianao izany satria maro ny misy. Truth or Dare dia, miaraka amin'ny hafa, iray amin'ireo mpandray anjara sy filamatra raha te hanitatra ny lohahevitra ianao mba tsy ho monotona foana.
Vinavina ny sarimihetsika na andiany
Amin'ny alàlan'ny emojis dia azonao atao ny manolotra soso-kevitra hamina sarimihetsika na andian-dahatsoratra ho an'ny mpandray anjara rehetra ao amin'ny vondrona, ao anatin'izany ireo izay tsy dia mavitrika isan'andro. Amin'ny alàlan'ny fanolorana karazana, hosokafana ny katalaogin'ny roa tonta, satria misy karazany maro, na amin'ny andiany na amin'ny sarimihetsika.
Avy amin'ny fitambaran'ireo emoji ireo dia hivoaka ny sarimihetsika na andian-tantaraAza hadino ny milaza raha iray na iray hafa, miaraka amin'ity dia hanampy ireo mpandray anjara rehetra handeha haingana kokoa ianao. Vinavina ny sarimihetsika na andian-tantara dia iray amin'ireo lalao tsy azo adino amin'ny WhatsApp satria haingana sy mahafinaritra amin'ny fotoana iray izy io.
Fanamby manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9
Misafidiana isa amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 ary mandefasa fanamby ho azy, noho izany dia tsy maintsy mamaly haingana ianao amin'ny valiny avy amin'ireo maro isan-karazany. Ireto misy valiny samihafa:
Ny fanamby amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 dia mety raha olona nalefa ianao na ny hafa koa, lalao mivantana ho an'ny WhatsApp tonga lafatra raha tianao ny olona iray. Ankoatry ny valiny dia azonao atao ny mampiasa fanontaniana hanatonana mivantana olona iray ary hahafantaranao azy ireo raha mametraka fanontaniana maro misesy ianao.
Eritrereto ny lesoka
Ity lalao tsotra ity dia hametraka ny sain'ny mpifandray aminao hieritreritra mafy, indrindra amin'ny alàlan'ny famoahana ny fanamby napetrak'ilay tompon'andraikitra na lehibe. Ohatra, azonao atao ny mametraka ny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ary 10, marina daholo ireo, ka ny lesoka dia mety ho amin'ny teny «Manaraka».
Azonao atao ny mametraka teny eo anelanelan'ny isa, angamba amin'izany ianao dia hanelingelina ny sain'ny maro amin'ireo izay ao anatin'ny vondrona WhatsApp izay nanapa-kevitra ny hametraka. Azonao atao izany amin'ny litera, miaraka amin'ny isa ary amin'ny fehezanteny, esory izay renisoratra na zanapeo mba hanampy karazana lesoka.
Inona ireo teny ireo?
Ny kolontsaina dia ampahany lehibe amin'ny fianatsikaIzay no maha tsara ny mizara ny ampahany aminy amin'ireo olom-pantatrao isaky ny afaka. Ny ohabolana espaniola dia mety tsara indrindra amin'ny fotoana maro, indrindra amin'ireo izay ilaina ny manome voam-pasika ao amin'ireo vondrona WhatsApp izay nahazatra anao matetika.
Tahaka ny zava-misy amin'ny fijerena sary mihetsika sy andian-tantara, amin'ity lalao miorina amin'ny emojis ity dia ho azonao atao ny manoratra ireo teny tianao tadidinao ireo. Raha ohatra ka mametraka emoji-vava ianao, iray hafa lohan'ny canine sy trondroIreo emotika telo dia manana ny dikany "Maty amin'ny vava ny trondro."
Tadiavo ny totozy
Noforonina mba hahitana totozy eo amin'ireo biby maro, maro amin'izy ireo no mitovy amin'ny feon'ity biby ity izay mahafeno fepetra amin'ny fianakavian'ireo biby mpikiky. Mety toy ny lalao hafa ho an'ny WhatsApp amin'ny maha-mpanatanjaka tena isan'andro sy tonga lafatra amin'ny fivelarana ara-tsaina.
Izy io dia iray amin'ireo lalao WhatsApp ho an'ny finday izay nohavaozina rehefa mandeha ny fotoana, mety indrindra hilalao amin'ny vondrona misy anao. Ankoatr'izay dia maro ny ankizy izay milalao azy io matetika satria mampiankin-doha tokoa. Tsy toy ireo lesoka fito ireo, saingy ilaina ny mieritreritra ary, ambonin'izany rehetra izany, ny fampiasana ny fahitana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Lalao hilalaovana amin'ny WhatsApp
Samsung Galaxy Z Flip3 sy Galaxy Z Fold3 dia nambara: Fantaro ny toetrany, ny vidiny ary ny fandefasana amin'ny fomba ofisialy